टिकटककै कारण सेतिले लग्यो ? संगै गएका २ जना साथिको यस्तो बयान विबाहको कुरामा के भनेकी थिइन ? (भिडियो हेर्नुस्) - Sano Aawaj
टिकटककै कारण सेतिले लग्यो ? संगै गएका २ जना साथिको यस्तो बयान विबाहको कुरामा के भनेकी थिइन ? (भिडियो हेर्नुस्)
Posted in Breaking news 1, ट्रेन्डिङ, रोचक खबर, समाचार
Prevटिकटकमा एकदमै भाइरल , उनका हात छन् तर हत्केला अौलाहरु भने छैनन् , हेर्नुहोस रमाइला टिकटकहरु (हेर्नुस् भिडियो )
Nextबिनिता कुमालको बुवा नेपाल आउदै। बुवालाइ लिन बिनिता काठमाडौं जाने(भिडियो हेर्नुस्)